Saacadihii la soo dhaafay Ciidamo ka tirsan Millateriga Soomaaliya ee ku sugan gobolka Gedo ayaa waxaa ay tuulooyin hoostaga degmada Baardheere ee Gobolkaas ka sameeyeen howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab.
Saraakiisha howlgalka hoggaamineysa ayaa waxaa ay sheegeen inay howlgalkaas ay kula wareegeen deegaano ka tirsan Gobolka Gedo oo ay Gacanta ku hayeen Al-Shabaab.
Taliyaha Ururka 49aad ee Ciidamada xoogga dalka ee Gobolka Gedo Dhame Cali Maxamed ayaa sheegay in u jeedkoodu uu ahaa in Al-Shabaab laga saaro deegaano hoostaga degmada Baardheere,isla markaana weli uu socdo.
Waxa uu sheegay taliyaha inay Shabaab kala wareegeen tuulada Cali Xareed iyo tuulooyin kale iyo Bar-koontorool oo ay Shabaab gaadiidka lacago uga qaadi jireen.
Taliyaha ma shaacin wax dagaal ah oo dhexmaray,iyaga iyo Al-Shabaab intii ay howlgalka ku jireen,hayeeshee uu sheegay in uu yahay mid ay ku doonayaan in guud ahaan deegaanada hoostaga Baardheere ay uga saaraan Al-Shabaab.
← Kenya oo digniin ka soo saartay kalluumeysiga xeebaha Soomaaliya
Somaliland iyo Puntland oo xiisad cusub ka dhex tafatay iyo ciidan isku hor fadhiya gobalka Sanaag →
Wariye Axmed Khaliif Geedi Oo Lagu Xiray Magaalada Gaalkacayo
Akhriso: Go’aamada ay gaareen odiyaasha Galmudug
October 31, 2019 October 31, 2019 Somali Top News 0